शोभित बस्नेतकै कारण ‘डाँडाको वरपिपल’ फ्लप ? सिंगै हलमा ६ जना दर्शक ! – Dainik Sangalo
शोभित बस्नेतकै कारण ‘डाँडाको वरपिपल’ फ्लप ? सिंगै हलमा ६ जना दर्शक !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन २८, २०७८ समय: ११:१५:००
काठमाडौं, लामो समयको अन्तरालमा हिजो एउटा नयाँ नेपाली चलचित्र हलमा रिलिज भयो । दशैंको अवसरमा रिलिज गरिएको चलचित्रले दर्शकलाई हलमा फर्काउने आशा आम चलचित्रकर्मीले राखेका थिए ।तर पहिलो गाँसमै ढुंगा झैं भएको छ ।
Last Updated on: October 14th, 2021 at 11:15 am